Ihe na - eme ime ahụ, nsogbu na nsogbu mgbe ịwa ahụ
Ahụ ike ụmụ nwanyị Ime ime
Ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya: 50 nde afọ ime na-eme kwa afọ na ụwa! N'ihi ya, ihe dị ka otu n'ime afọ ime anọghị ka ọ ga-akwụsị mgbe ọ na-amụ nwa. N'ụzọ dị ịtụnanya, 90% nke ụmụ nwanyị na ọ dịkarịa ala otu ugboro na ndụ ha na-ete ime. Ma mmadụ ole na ole na-eche echiche banyere ihe na-eduga na ime ime ahụ, ihe na-akpata na nsogbu mgbe ịwa ahụ nwere ike ịzụrụ nwanyị dị oké ọnụ ...
Kedu ihe ize ndụ nke ite ime?
Ọ bụghị ọbụna banyere ihe ngosi nke uche nke nwanyị, omume ọjọọ na obi abụọ ya. Ọ bụ ezie na nke a bụkwa akụkụ dị mkpa, mgbe ụfọdụ na-eduga ná nsogbu uche dị oké njọ. Eziokwu ahụ bụ na ime ahụ nwere ike ibute ihe iyi egwu n'onwe ya ọ bụghị nanị n'ihi ahụ ike ụmụ nwanyị, kamakwa maka ndụ ya.
N'ihe metụtara ime ahụ, ihe ize ndụ abụghị ọrụ n'onwe ya, kama ọ nwere ike ịnweta ọrịa, nsogbu na ịrịa ọrịa. Odi ka otutu nsogbu na-adabere na otutu. Nke a bụ afọ nwanyị, na ọnọdụ nke ahụike ya, na ọnọdụ nke ime afọ gara aga.
Ọbụna ọkachamara kachasị aka ga-enwe ike inye 100% nkwenye na ime ahụ ga-agabiga n'enweghị ihe ga-esi na ya pụta, ọ dịghịkwa nsogbu ndị inyom na-eyi egwu. N'ezie, nsogbu ndị na-adịghị mma na-ebili na 10-20% nke ndị inyom kpebiri ime ihe siri ike a ma gbochie ime ime.
Ihe kachasị njọ ma dị ize ndụ bụ nsogbu nsogbu. N'oge ọrụ ahụ, microorganisms na-emerụ ahụ na-abanye n'ime ahụ nke akpanwa, nke na-eme ka ọ ghara imerụ ahụ. Mgbe ụfọdụ, ụzụ na-akpata ọrịa ma ọ bụ na-akpata septic, nke na-eyi ndụ nwanyị egwu. Ihe kariri ọkara nke ọnwụ mgbe ime na-akpata nsogbu na-efe efe mgbe a wachara ya ahụ, na-eduga ná mmepe nke ụzụ oyi.
Na nje bacteria, a na-emetụta akụkụ ahụ na anụ ahụ nile. Nke a nwere ike igbochi ọrụ nke ụbụrụ, obi, akụrụ na imeju, ọ pụkwara iduga ọnwụ. Ọtụtụ ụmụ nwanyị, maka ọtụtụ ihe kpatara ya, ka na-ahọrọ ịmalite ịkwa iko n'ụlọ, mana nhọrọ a ga-eme ka ọ dị mfe ịmepụta nsogbu na-efe efe na, karịsịa, nje. 80% nke ọnwụ n'etiti ụmụ nwanyị na-eme mgbe ha kpebiri ịbata n'èzí ụlọ ọgwụ.
Mgbe ụfọdụ, ihe na-eduga na-ete ime, ọ bụghị ngwa ngwa achọpụta. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọrịa ahụ nwere ike ịkwụsị ichetara onwe ya na nwa oge na-adịghị ala ala. O yiri ka nwanyị ahụ ọ dịla mma, ma ahụ ahụ zoro nje ahụ. Ọ na-echere oge kwesịrị ekwesị ka ọ rụọ ọrụ na ịkpata ọrịa. Nke a na - eme, dị ka a na - achị, site na ike ọgwụgwụ nke ọrịa ahụ, nke pụtara na oyi ma ọ bụ mgbarụ nke ọrịa ndị ọzọ na - adịghị ala ala.
Ime na mgbe nile bu ujo na nsogbu siri ike maka aru dum. Nke a na-adabere ọ bụghị nanị n'ọnọdụ uche, kamakwa nnukwu ọrịa mberede hormonal kpatara kpatara. Enweela ike ịzụ nwa, a na-emepụta homonụ ngwa ngwa. Na mberede - ime ime ngwa ngwa na-emechi, e nwere mmerụ ahụ. Mgbe ufodu, nwanyi nwere ike izute mgbanwe di otua na nguzo nke homoni ka o nwekwuo ndu ugha. Tụkwasị na nke ahụ, nkwụsịtụ dị otú ahụ site n'èzí adịghị iche na njedebe zuru oke. N'ụzọ dị mwute, mgbe ndị dọkịta na-edepụta ụdị ọgwụ nje mgbe nsogbu ndị na-efe efe malitere ịmalite. Nke a adighi ike.
Ihe ọzọ dị mgbagwoju anya mgbe ịwachara ahụ bụ ọbara ọgbụgba. Mmadụ asaa n'ime ndị inyom nwụrụ anwụ iri nwere kpọmkwem ihe kpatara nke a. N'ime afọ ime, ihe na-eto eto na-etolite, ọ na-eme ka o sie ike site n'ịba ụzụ nke mgbidi ya. Ọnụ ọgụgụ na ibu nke arịa ahụ na-abawanye na akpanwa. Nke a bu n'uche site na okike ka nwa ebu n'afọ wee na-etolite etolite na ya. Ime ime bụ mwepụ nke nwa ebu n'afọ na akpụkpọ ụkwụ ya site na akpanwa na enyemaka nke ngwaọrụ pụrụ iche. N'otu oge ahụ na mgbidi nke akpanwa, enwere nsị na mkpịsị, nke na-esi ike ịkwụsị ọbara ọgbụgba. N'ezie, ete ime na-eme "ọhụụ", dọkịta enweghị ike itinye nkedo n'ime akpanwa ma gharadị ịhụ ebe ọbara si apụta.
Ihe mgbagha ọzọ dị ize ndụ bụ ime ihe, nke ahụ bụ, onye na-eme ka ikuku dị n'ime arịa ọbara. Karịsịa, nke a na-eme mgbe a na-ete ime na mmechi okwu (mgbe izu iri na abụọ gasịrị). Mgbe ahụ, na mgbakwunye na nwa ebu n'afọ n'onwe ya, ọ dịkwa mkpa iji wepụ mmiri mmiri nke amniotic n'ime nke ikuku na-abanye wee gbasaa ngwa ngwa n'ime arịa ndị ọ bụla n'ime ahụ nwanyị. Nke a nwere ike iduga mgbochi usoro nke arịa ọbara dị iche iche nke dị mkpa, nke na-ewe oge ole na ole na-eweta ọnwụ.
Ihe puru omume nke nsogbu na - eduga n'inweghi infertility dị ukwuu ma ọ bụrụ n'afọ ime bụ nke mbụ. A na-adọkarị aka na nke a n'ụlọ ọgwụ, nke a aghaghị icheta mgbe nile. Mgbe ụfọdụ mkpebi mkpebi na-adịghị mma nwere ike ime ka ọ ghara ịbụ nne. Iche banyere ya kwesiri nwanyị ọ bụla nke na-ewere nzọụkwụ a.
Ntakịrị ihe banyere ite ime
E nwere ụzọ dịgasị iche iche iji gbochie ma kwụsị ịmịnye eriri afọ n'oge ịwa ahụ. Mgbe ụfọdụ, ọ na-ezuru iji emetụta akpanwa n'ụzọ anụ ahụ (ntinye nke akpụrụ n'elu ala), ma ọtụtụ mgbe ndị ọkà n'ọrịa na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe. Ha niile nwere ihe ndị na-egbu ahụ. Ha na-eduga na mbelata ọbara ọgbụgba, ma site na nkwụsị nke mgbaàmà nwere ike ịlaghachi. A manyere nwanyị a ka o were ọgwụ ndị a, wee chọpụta na ọ bụrụ na ha enweghị ya, ọ gaghịzi adị.
N'ihe banyere ọbara ọgbụgba, ihe ndị ọzọ ndị obstetricia na-akọ tupu ọrụ ahụ arụ ọrụ. Ihe ize ndụ nke mgbagwoju anya a na-abawanye na ụmụ nwanyị ndị nwere nkwarụ ọbara. Ihe ndị ọzọ na-ebute ọdịnihu bụ ọnụnọ nke abortions nke mbụ, ọgwụgwọ nke akpanwa ma ọ bụ ọrịa nke akụkụ ahụ nke nwanyị.
N'ihe omume, onye ọ bụla nwere ike inye ihe atụ mgbe otu nwanyị dị mma zuru oke mgbe ọ nwụsịrị nke ime afọ tụfuru ohere naanị ya ịghọ nne.
Kedu ka ime ime si emetụta ahụ ike nke nwanyị?
Ime ime ahụ na-eme n'oge ime afọ
Enwere ike ime ime nke abụọ
Niile banyere nsogbu nke Obere abortions
Mmetụta nke ite ime na psyche nke nwanyị
Kedu ka ime ahụ ike si eme?
Ime ime: uru na nsogbu
Nwee obi ụtọ na - ahọrọ: ihe ọbụla ọ bụla - na ntụrụndụ oriri na-esonụ
Nwoke na-akpagbu onwe ya: nhazi na otu esi kụziere ya ka o zuo ike
Nri achicha achicha
Otu esi echebara ntutu ntutu isi: 4 nzuzo Kim Basinger
Dima Bilan anaghị atụ anya ịghọ nna m ugboro abụọ
Ụdị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ: atọ edozi isi na Ejiji Week-2016
Ụzọ nke oge a na-agwọ ọrịa na-efe efe
Ọgazị Afọ Ọhụrụ na apụl na cumin
Kedu otu esi nagide akwa mgbu?
Na-eto eto na poteto na breadcrumbs
Ọnwa nke isii nke ndụ nwata ahụ
Onye na-eme ihe nkiri Yevgenia Dmitrieva
Uwe ala maka agbamakwụkwọ ahụ
Otu esi eji aka ha eme ka umuaka muta ihe
Ihe ịchọ mma nke iwu uwe
Osisi flaxseed, ihe bara uru
Mkpesa maka February 23 na ụlọ akwụkwọ na na klas ya - egwuregwu ọchị, na-akpa ọchị, egwuregwu na egwuregwu na-asọpụrụ onye na-agbachitere Ụbọchị Nna.